Nandrara ny mpitsidika avy amin'ny firenena fito any atsimon'i Afrika i Israely
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Israel Vaovao Vaovao » Nandrara ny mpitsidika avy amin'ny firenena fito any atsimon'i Afrika i Israely
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Botswana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Eswatini Breaking News • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao Mafana Lesotho • Vaovao farany Mozambika • Vaovao Mafana Namibia • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Zimbaboe Breaking News
Nanambara androany ny Biraon'ny Praiminisitra Israeliana fa nampidirina ao amin'ny lisitry ny firenena 'mena' an'i Israely i Afrika Atsimo sy ireo firenena Afrikana enina hafa.
Ny variana – antsoina hoe B.1.1.529 – dia manana “vondrona kintana tsy mahazatra” misy fiovana, izay mampanahy satria afaka manampy azy hiala amin'ny valin'ny fiarovan'ny vatana izy ireo ary hahatonga azy ho mora kokoa, hoy ny mpahay siansa tamin'ny mpanao gazety nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tany Afrika Atsimo.
Taorian’ny fihaonana, notontosain’ny Praiminisitra ny Isiraely Naftali Bennett, firenena afrikanina fito – Afrika Atsimo, Lesotho, Botswana, Zimbaboe, Mozambika, Namibia ary Eswatini – dia tafiditra ao anatin'ny lisitr'ireo firenena “mena”, na firenena tsy mahazo mandeha ny Isiraeliana, raha tsy mahazo alalana manokana avy amin'ny minisiteran'ny fahasalaman'i Israely.
Ny israeliana nody avy any amin'ireo firenena ireo dia takiana handany 7-14 andro ao amin'ny hotely quantine aorian'ny fahatongavany.
Tsy mahazo miditra ao Israely koa ireo mpitsidika avy amin’ireo firenena afrikanina ireo, hoy ny biraon’ny praiminisitra.
Isiraely dia nahitana tranga 1.3 tapitrisa voamarina momba ny COVID-19 ary maherin'ny 8,000 no maty hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina.
Araka ny filazan'ny minisiteran'ny fahasalamana ao amin'ny firenena dia 57% ihany ny IsiraelyNy mponina 9.4 tapitrisa dia vita vaksiny tanteraka.